Magnetic Hlunga Izinsiza kusebenza - China Ningbo Sine
Jikelele Incazelo Magnetic Hlunga yakhelwe duty ezisindayo, yenqwaba liquid-semi ketshezi umugqa ukugeleza izinhlelo. Inikeza ukuvikelwa kazibuthe kolayini liquid processing imishini. It is kabanzi ngoba filtration ukungcola esihle ayoni ezitholakala zokugcoba, coolants, amafutha wokubacindezela, slurries kwezobunjiniyela, ezithaka imithi azihlanganisa futhi izimboni zamakhemikhali. Kwesihlungi Magnetic kuyinto esikhiphekayo kalula kusukela engagqwali ebiyelwe nge ziba ngcono ezimbalwa esheshayo ukukhululwa fasteners. Ukuze t ...
Magnetic Hlungayakhelwe duty ezisindayo, yenqwaba liquid-semi ketshezi umugqa ukugeleza izinhlelo. Inikeza ukuvikelwa kazibuthe kolayini liquid processing imishini. It is kabanzi ngoba filtration f ukungcola bahlole ayoni ezitholakala zokugcoba, coolants, amafutha wokubacindezela, slurries kwezobunjiniyela, ezithaka imithi azihlanganisa futhi izimboni chemical.
Kwesihlungi Magnetic kuyinto esikhiphekayo kalula kusukela engagqwali ebiyelwe nge ziba ngcono ezimbalwa esheshayo ukukhululwa fasteners. Ukuze ukususwa izinhlayiya emihle kazibuthe noma oxidized yensimbi izinhlayiya, ngokuvamile uhlelo nge ukugxila High Rare Earth Magnets Kunconywa. Iyunithi lucuketse esibuthakathaka, la mandla kazibuthe isivalo umhlangano iziqobosho ukuthi kuvikela iyunithi ndawonye.
Namandla unomphela amashubhu kazibuthe fixed ungene nohlaka. Lapho yini equkethe yensimbi / steel izinto sidlula ngohlaka, izinto zensimbi / steel babeyozihlanganisa phezu kodonga amashubhu. Ngenxa yalokho, imishini yakho futhi izindawo kuyoba ephephile futhi ephilile, kanye nemikhiqizo yakho kuyoba ephephile ukusetshenziswa.
izihlungi Magnetic zingasebenza kakhulu emithini yokwelapha, ukuthuthwa kwendle, zendwangu, imishini kanye nokudla. I filer uyokhanga izinto yensimbi / steel kude uketshezi, kusukela phakathi okusanhlamvu noma izimpushana.
Usayizi, ubude ukuma
Usayizi futhi ubude amashubhu kazibuthe, futhi ukuma ngohlaka kuzohluka ngenxa yesicelo sakho.
Vula bese Download umkhiqizo ikhathalogu isihlungi kazibuthe
Previous: Magnetic Hlunga Bar
Olandelayo: Roller Magnetic
Magnet Hlunga Bar
Amafutha Hlunga Izinsiza kusebenza
Water Hlunga Izinsiza kusebenza